Jereo hoe ahoana no andoavan-ketra any Portugal | Vaovao momba ny dia
Susana Garcia | | General, Portiogaly
Matetika ny mandeha any Portiogaly amin'ny alàlan'ny fiara raha avy any Espana isika, ka tsy maintsy fantatrao ny safidintsika an-dalana. Na dia azo atao aza ny mahita lalana tsy misy tolam-bahoaka, dia lalana maharitra ela kokoa izy ireo. Safidy lehibe rehefa mitsidika an'i Portiogaly ary mifindra amin'ny toerana iray mankany amin'ny toerana hafa dia ny fampiasana ny tolotra. Izany no antony hijerentsika ny fomba fiasan'ny tolam-bahoaka any Portugal.
ireo ny tolotra dia hita eny amin'ny arabe ary matetika izy ireo dia tsy miasa toy ny amin'ny fiarahamonina misy antsika, noho izany dia tsara kokoa ny manana hevitra momba izay tokony hataontsika. Aorian'izay isika vao afaka mikasa mialoha ny dia amin'ny alàlan'ny fiara any Portugal hijery ny tanàna lehibe sy ny toerana mahaliana.
1 Ahoana ny fandoavana ny toloa ao Portugal
1.1 Aloavy amin'ny alàlan'ny fitaovana elektronika
1.2 Karatra prepaid virtoaly
2 Inona no mitranga raha tsy voaloa ny tolam-bola
3 Ahoana no hahalalana izay ho aloako
Ahoana ny fandoavana ny toloa ao Portugal
Hatramin'ny taona 2010 dia nahita hevitra mitovy amin'ity izahay izay misy tranoheva handoavana ny tolam-pahafahana. Fa nanomboka teo dia nesorina izy ireo ary mandoa amin'ny fomba hafa. Betsaka ny olona misavoritaka rehefa hitany fa tsy misy boothsatria tsy fantany ny fandoavan-karama. Na izany aza, tena tsotra ny fizotrany. Misy fomba maro handoavana ny làlambe any Portugal tol.
Aloavy amin'ny alàlan'ny fitaovana elektronika
Iray amin'ireo fomba iray handoavana anao ny fampiasana fitaovana elektronika. Ity karazana fitaovana ity dia azo vidiana eto amin'ny firenentsika ary miasa ho an'ny lalambenay izy ireo ary tena ilaina. Hevitra tena mampahazo aina izy io satria miaraka amin'izy ireo dia afaka mahazo fihenam-bidy amin'ny làlana mahazatra ihany koa isika ary afaka mampiasa azy ireo avy any Espana. Raha manana tahiry elektronika novidiana tamin'ny toerana toa an'i Banco Santander, Banco Popular, Liberbank, Caja Rural na Abanca, ankoatry ny hafa isika dia afaka mampiasa azy io tsy misy olana. Amin'ny faritra sasany dia handrenesantsika ilay vavam-bary izay avoakany rehefa mandalo ilay fitaovana, saingy tsy maintsy raisina fa tsy any amin'ny faritra hafa dia tsy mitendry. Tsy midika izany fa tsy tonga izany, satria na eo aza izany dia mavesatra azy. Ity no iray amin'ireo safidy mahasalama indrindra azontsika atao, indrindra raha mankany Portiogaly matetika isika na mampiasa lalambe tsy tapaka.
Karatra prepaid virtoaly
Fomba iray hafa handoavana ny trosa any Portugal koa ny mampifandray ny takelaka misy ny fiara amin'ny karatra. Atao saika izany, ka ny karatra dia mifandray amin'ny fisoratana anarana ary voaloa ny fandoavam-bola. Izy io dia azo atao amin'ny antsoina hoe EASYToll, ireo làlana izay ampiantsika ny karatra amin'ny fotoana iray mamaky fakan-tsary ny fakan-tsary ary mampifandray azy ireo. Ity dia hitohy handoa ny fandoavambola eny an-dalana. Ny zavatra ratsy dia tsy manana an'io serivisy io amin'ny làlambe sasany fotsiny isika toa ny A22, A24, A25 ary A28.
iray hafa ny fomba fandoavana dia amin'ny TollService. Ity serivisy ity dia ahafahantsika mandoa telo andro na amin'ny dia manokana. Izy io dia manana fetra famandrihana telo isan-taona ary ao amin'ireo manana fanangonana tolotra elektronika ihany. Safidy tsara io raha hanao dia kely isika na raha handeha, ohatra, mankany amin'ny seranam-piaramanidin'i Porto na Lisbon. Manana fotoana voafetra tokoa izy io fa safidy tsara ho an'ny fitsangatsanganana amin'ny faran'ny herinandro sy fitsangatsanganana, mba tsy hividianana fandoavana avo kokoa.
Ny hafa safidy izay toa mahazo aina kokoa dia ny mampiasa ny TollCard, mampifandray ny fisoratana anarana aminay miaraka amin'ny vola mialoha izay alainay mialoha amin'ny Internet. Misy vola hatramin'ny 40 euro ary herintaona ny faharetany, noho izany dia tena mahasoa kokoa noho ny safidy hafa. Hanome antsika fahalalahana bebe kokoa izany, na dia safidy tsara aza izany raha mikasa hanao dia lavitra na mihoatra ny telo andro isika.
Inona no mitranga raha tsy voaloa ny tolam-bola
Ny fandoavan-ketra any Portugal dia tsy maintsy atao toy ny any Espana sy Ny tsy fanaovana izany dia mitaky fandikan-dalàna manana lamandy ambony izany. Betsaka ny olona mieritreritra fa satria tsy misy trano heva dia afaka mandalo fotsiny ianao mba hisorohana ny fandoavam-bola. Ny olana dia misy ny fakantsary ary voarakitra an-tsoratra ny zava-drehetra, ka raha manakana antsika izy ireo dia afaka mandoa hatramin'ny folo heny izay tokony aloantsika. Nahazo alalana ihany koa izy ireo hanentana ny fiaranao mandra-pandoany ny trosany. Azo antoka fa tsy mendrika hanaovana risika an'io, indrindra rehefa afaka mandoa vola mora amin'ny Internet isika.
Ahoana no hahalalana izay ho aloako
Mety manana drafitra kasaina hatao isika ary tsy mahalala izay mety ho vidin'izany. Zava-dehibe, raha te handamina ny zava-drehetra isika ary hahafantatra izay lanintsika, dia izany Andao hikajiana ihany koa ny lanintsika amin'ny fiara sy ny tol. Izany no antony ahafahanao mahita fitaovana amin'ny Internet hahitanao ny tena vidin'ny làlana manokana sy ny làlambe azontsika aleha, satria indraindray dia manana fomba hafa isafidianana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Manao ahoana ny tolotra any Portugal